Izindaba - Okufanele kubhekwe lapho kukhethwa i-hood enhle kakhulu
Ngenkathi amakhethini omthunzi esebenza ngokoqobo, angaklanywa kahle ukuxhumanisa namakhethini akho nokunye ukuhlobisa. Ngakho-ke lapho uthenga, cabanga ngezinto eziza kuqala kuwe, kufaka phakathi inhloso nokubukeka konke, izindlela zokulawula nokufaka, kanye nokuhlanza nokugcinwa kalula.
Ama-Shades ahlinzeka ngemfihlo, ukwahlukanisa, ukunciphisa umsindo, ukuvikelwa kwelanga nokulawulwa kwamazinga okushisa. Ngokwesitayela, bangaphakamisa imizwa yekamelo lakho. Ngenkathi amathoni athambile angathathi hlangothi afana nomhlophe, i-beige, noma i-grey anganikeza ukufiphaza okuphawulekayo, ama-grays amnyama, ama-navy blues, nomnyama anikeze ukufiphaza okuhle kakhulu. Ama-sunshades amaRoma angenziwa ngaphandle kwamakhethini angeziwe, kepha ama-rollers kanye ne-honeycomb sunshades abukeka kangcono kakhulu lapho kuhlanganiswa namakhethini noma izilenge.
Izinto zokwakha nemibala
I-hood ivame ukwenziwa ngendwangu ye-polyester elukiwe futhi ayibonakali ezimeni eziningi ngenxa yokuvikela kwayo i-liner emnyama, ivimbela ukukhanya kwelanga nokukhanya okuzungezile. Ukwakha ukubukeka okungenamthungo, okukhangayo ngaphakathi nangaphandle, funa izithunzi zombala ofanayo ezinhlangothini zombili, kunokuba umngcele wezinto ezimnyama ngemuva. Ngenkathi ama-hues aklanywe ngokucophelela esebenza kahle ngemibala ekhanyayo, kufaka phakathi okumhlophe nezindlovu, imibala emnyama ijwayele ukuvimba ukukhanya ngempumelelo.
Uma kukhulunywa ngosayizi we-chroma, unezinketho ezimbili eziyisisekelo: ukusika kwangaphambili noma inkambiso. Izithunzi ezisikiwe kusengaphambili ziyatholakala ebangeni losayizi abajwayelekile ukwamukela uhla lwama-Windows yokuhlala ngosayizi ojwayelekile. Lapho uthenga, mane ulinganise iWindows yakho ngaphakathi noma ngaphandle kohlaka, kuya ngohlobo lokufaka olukhethile. Bese, khetha usayizi olungile kusuka kuzinketho ezinikeziwe, noma ukhethe inketho "Usayizi wangokwezifiso" bese ulandela imiyalo yomkhiqizo.
Lapho ulinganisa izithunzi zomthunzi, cabanga ukuthi zizofakwa kuphi futhi kanjani. Thola ukuthi ngabe zibekwe ngaphakathi noma ngaphandle kohlaka lwamafasitela nokuthi zinamathiselwe yini ohlakeni lwewindi ngetheyiphu noma ngensimbi.
Ama-sunshades anamathelayo athambekele ekubeni inketho eshibhe futhi angcono kakhulu kuzisombululo ezisheshayo ze-DIY, kanye nokuhamba nokuhlala cottage / rv. Umane ulinganise futhi usike amakhethini ukuze alingane iwindi lakho, usike imichilo yokunamathisela bese uyinamathisela kuzimele zamawindi ngokuya ngemiyalelo yomkhiqizo.
I-visor yokufaka yangaphakathi idinga ukulinganiswa ngokunembile futhi ifakwe ngaphakathi kohlaka lwewindi ngamabakaki wokufaka. Lezi zithunzi zinikeza ukubukeka okuhlanzekile, okubushelelezi futhi kuthatha isikhala esincane kunesithunzi sangaphandle sokufaka. Banikeza nezinketho eziningi zamakhethini anezinwele nezinye izindlela zokwelashwa kwamawindi.
Ama-sunshades angaphandle abekwe ngaphandle kohlaka lwamawindi ngokufaka obakaki kubaningi bomthunzi ekukhanyeni. Ngokuvamile lawa ngamakamelo anconyelwa ngongoti bamawindi adinga ubumnyama obukhulu, njengamakamelo okulala. Zidinga izilinganiso ezinembe kakhudlwana kunama-sunshades akhelwe ngaphakathi futhi zenza neWindows ibukeke inkulu.
Isifihla-buso esisebenza ngesandla sisebenza ngentambo, iketanga, noma inkinobho yokucindezela. Ama-roller, izidleke zezinyosi namakhethini aseRoma ayatholakala kuzo zombili izinhlobo ezingenazintambo nezingenazintambo. Amakhethini kagesi awanazintambo noma amalebula futhi asebenza ngama-elekthronikhi ahlanganisiwe. Imindeni enezingane nezilwane ezifuywayo ibhekwa njengephephile ukusebenzisa imisebe yelanga engenazintambo ngenxa yobungozi bokuthi izintambo zikhubeke noma zibambe izitho zomzimba.
Uma ufuna izibuko zelanga zikagesi, uzothola izinketho eziningi zokulawula. Ukubukeka nokuzizwa okuhlanganiswe kakhulu, lezi zithunzi zingahlanganiswa neswidi odongeni noma uhlelo lokusebenza kudivayisi ehlakaniphile. Ukubhangqa izibuko zelanga zikagesi namadivayisi wasekhaya anezinzuzo eziningi, kufaka phakathi izinketho zesikhathi sesikhathi. Isibonelo, uma ikhaya lakho lithola ilanga eliningi ekuseni noma ntambama, ungabeka izithunzi zakho ngezikhathi ezithile.
Hlala ulandela imiyalo yokunakekelwa komkhiqizi yesondlo. Kodwa-ke, ngokuvamile, ama-hood amaningi angahlanzwa ngezindwangu zothuli ze-microfiber noma ama-vacuum ekhanda. Amakhethini ama-rolling yiwona alula ukuwahlanza ngoba ayizicaba. Ikhekhe lezinyosi kanye nesithunzi esithambile samaRoma kunokuthungwa okuningi, ngakho-ke kuzodingeka uqaphele uthuli. Ngezimpumputhe zikagesi, ukususwa kothuli kufanele kube kwenele.
Ukuhlola Umswakama Card, Ikhadi lamahhala leCobalt, Ikhadi Lezikhombisi Lomswakamo Lamachashaza Ayisithupha, Ikhadi Lokukhomba Umswakama, Ikhadi Lesikhombi Somswakama Mahhala, ICobalt Mahhala,